दुब्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? दूधमा मिलाएर खानुहोस् यो चीज, केहीदिनमै बढ्नेछ वजन – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीदुब्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? दूधमा मिलाएर खानुहोस् यो चीज, केहीदिनमै बढ्नेछ वजन
January 11, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 5402
यदी तपाईको बच्चाले राति ओछ्याउनमा पिसाब गर्ने समस्या छ भने बिहान खाली पेटमा खजुरवाला दूध पिलाउनुहोस्। ध्यानदिनुहोस यदी बच्चा ५–१० वर्षबीचको छन् भने उनीहरुलाई १, २ वटा खजुरमात्र दिनुहोस् । १० वर्षमाथिका छन् भने २ वा ३ वटा खजुर दिनसक्नुहुनेछ।
April 26, 2021 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 3007
November 23, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 12295
November 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 10955